Mitady tale ho an’ny Tetikasa Advox ny Global Voices, mba hitarika ny asanay eo amin’ny teknolojia sy ny zo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2021 18:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, English
Tadiavinay ny kandidà manana fahalalàna lalina momba ny olana mikasika ny zo ankihihihy (nomerika) manerantany, manana traikefa amin'ny famolavolana sy fananganana media, tetikasa fikarohana sy fiarovana, asa momba ny angon-drakitra, fanoratana na fiarovana ny zo ankihihihy (nomerika) sy ny zon'olombelona ary miara-miasa amin'ny ekipa miparitaka manerantany.
Kandidà mahaliana anay manokana ireo zatra miasa na momba ny fikarohana fifandraisan'ny teknolojia sy ny fitantanana tsirefesimandidy ary ireo fitondrana mpametra zo.
Fikambanana iraisam-pirenena, media virtoaly ahitana mpiasa, mpiantoka ary mpandray anjara an-tsitrapo ao amin'ny kaontinanta tsirairay ny Global Voices. Manoratra, mikaroka sy miaro ary mandika teny ireo mpandray anjara ato aminay mba hanasongadina tantara sy fomba fijery avy amin'izao tontolo izao izay tsy dia fahita firy eo amin'ny fampitam-baovao mahazatra iraisam-pirenena.
Manaiky izahay fa eo andalam-pihaikana ny zon'olombelona amin'ny fahalalaham-pitenenana, amin'ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao, ary amin'ny tsiambaratelon'olona manokana ny governemanta, ny orinasa, ary ireo mpiantsehatra hafa matanjaka manerantany . Mino izahay fa manana ny toerana manokana tsy manampaharoa amin'ny fandraketana sy fanazavana ireo fandrahonana ireo ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Mikendry ny hampiasa ny hery lehibe ananantsika – ny tambajotrantsika, ny fahalalantsika ary ny feo hamafisintsika ny tetikasa Advox – mba hampiseho ireo fomba maro ahafahan'ny teknolojia manainga na manitsakitsaka ny zon'olombelona, ​​indrindra indrindra eo amin'ny fahalalahana miteny.
Ny Talen'ny Advocacy no hitarika ireo ezaka ireo, amin'ny maha-mpitarika azy sy amin'ny maha-mpanolo-tsaina azy ho an'ireo mpikambana marobe ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay miasa mba hampisongadina ireo mandrahona ny zo ankihihihy (nomerika) sy ny fahalalahana miteny ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo manokana. Ny Talen'ny Advocacy no ho tetezana eo amin'ny fiarahamonin'ny Global Voices sy ireo vondrom-piarahamonina manan-daza hafa ary ireo tambajotran'ny mpikatroka zo nomerika sy ireo manam-pahaizana manerantany. Hampiseho ny fahaiza-manaony fa hahazaka, hifandray ary hanamafy ireo feo maro izay miresaka ireo olana ireo ny kandidà idealy.
Hiara-hiasa amin'ny vondrona mpirotsaka an-tsitrapo sy ny ekipan'ny fanoratana ny Talen'ny Advocacy mba hanaraha-maso ireo lahatsoratra vokarina ara-stratejika eo ambany elatry ny anarana Advox. Ho anisan'ny ekipa atidoha mpitarika ao amin'ny Global Voices ny talen'ny Advocacy, ary handray anjara amin'ny fitantanana fandaminana, paikady sy fihaiza-mitarika ankapobe.
Mahafehy ny teny Anglisy ny kandidà tena ilaina ary farafaharatsiny mahay fiteny iray hafa, ary telo taona farafahakeliny amin'ireto traikefa manaraka ireto:
Fananganana hetsika fiarovana momba ny olana mahakasika ny zo ankihihihy
Manana traikefa iraisam-pirenena midadasika, monina na miasa any amin'ny firenena maro
Ao anatin'ny vondrom-piarahamonina sy tambajotra zo ankihihihy (nomerika), ary manana fahazarana lehibe amin'ny olana ankehitriny sy ireo lohahevitra mikasika ny sehatra
Ary manana talenta voasedra amin'ireto sehatra manaraka ireto:
Tsy misy fepetra ara-jeografika mifandraika amin'ity asa ity; Tsy manana birao na foibe hita vatana ny Global Voices. Tsy maintsy manana fahazoana miditra sy azo antoka amin'ny aterineto haingam-pandeha ny kandidà, ary mahay miasa tsara amin'ny tontolo virtoaly feno, ary miomana amin'ny fanaovana fitsidihana iraisam-pirenena in-dimy isa-taona. Hanao tatitra any amin'ny Tale Mpanatanteraka sy Talem-pitantanana ny Global Voices ny Talen'ny Advocacy.
Alefaso mailaka amin'ny teny anglisy ireto manaraka ireto any amin'ny globalvoices.org, ahitana ny lohahevitra Global Voices Advox Director: [ny anaranao]:
taratasy manasongadina ny asanao sy manazava ny antony maha-kandidà sahaza anao amin'ny asa
Rohy na PDF mampiseho tetikasa, lahatsoratra na fanentanana telo efa niasana
Hatramin'ny 15 Jiona 2021 amin'ny 11:59 min ora ATSINANANA (GMT-4) ny fara-fandraisana ny fangatahana